InstaWear for Android Wear, Maqaarka Daawashada ugu fiican | Androidsis
Maqaarka ugu fiican ee loogu talagalay Android Wear waxaa bixiya InstaWeather for Android Wear
Waxaan la soo laabannaa waa inay lahaadaan barnaamijyo loogu talagalay Android Wear, saacadahaas xariifka ah ee leh nidaamka hawlgalka Google oo beryahan dambe aad moodo. Munaasabaddan waxaan kuu soo bandhigayaa saacad ama codsi maqaar, kaas oo, had iyo jeer ka yimid ra'yigayga shaqsiyeed, waa maqaarka ugu wanaagsan ee daawashada Android Wear.
Codsiga, oo si buuxda uga shaqeynaya ikhtiyaarkiisa bilaashka ah, in kasta oo uu leeyahay nooc Premium ah ama rukunsi, waxaan si toos ah uga heli karnaa Google Play Store, dukaanka dalabka rasmiga ah ee Android, magaca InstaWeather ee loogu talagalay Wear Android.
1 Maxay InstaWeather for Android Wear na siisaa?
2 IW Weather LCD waa Maqaarka Daawashada ugu fiican ee loogu talagalay Wear Android
3 Ka soo dejiso InstaWeather for Android Wear lacag la’aan dukaanka Google Play
Maxay InstaWeather for Android Wear na siisaa?
InstaWeather oo loogu talagalay Wear android, aniga ayaa ii ah mid ka mid ah maqaarka maqaarka ugu fiican ee loogu talagalay Android Wear. Laga soo bilaabo noocyadeeda gebi ahaanba bilaashka ah ayaa na siisa todobo hargahood oo daawasho ah oo loogu talagalay Android Wear, taas oo ay mudan tahay in lagu muujiyo kuwa kale oo dhan, saacadda nus-digital-ka ah ee xarragoon leh, oo ah tii aan marka hore ku tusay fiidiyaha ku lifaaqan cinwaanka boostadan, kaas oo si buuxda ii soo jiitay oo aan ku dheganaa aniga LG G Watch jiilka kowaad.
IW Weather LCD waa Maqaarka Daawashada ugu fiican ee loogu talagalay Wear Android
Waqtiga IW LCD Waa Maqaarka lagu tilmaami karo inta ugu badan arjigan loogu talagalay Android Wear. Maqaarka saacadda oo na siiya macluumaad toos ah oo ku saabsan batteriga saacaddeena, batteriga Android -ka, macluumaadka cimilada oo dhammaystiran shanta maalmood ee soo socota, meelaynta macluumaadka iyo suurtogalnimada weyn ee beddelka midabka shaashadda LCD -ka ee ku -simanta xagga hoose oo na siiya macluumaad la xiriira heer -kulka hadda jira, iyo sidoo kale, dabcan, waqtiga hadda iyo taariikhda.
Laga soo bilaabo goobaha saacadda Maqaarka laftiisa, si toos ah shaashadda Android Wear, waxaan awoodi doonnaa inaan u habeynno qaar ka mid ah cabbirrada aan jeclahay sida cutubka xawaaraha dabaysha, halbeegga cabbirka heerkulka, muuji heerka boqolkiiba batteriga ama qaabka wakhtiga la soo bandhigi doono.
Ka soo dejiso InstaWeather for Android Wear lacag la’aan dukaanka Google Play
Cimilada ee Wear OS
Developer: byss mobilada
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Maqaarka ugu fiican ee loogu talagalay Android Wear waxaa bixiya InstaWeather for Android Wear
Nexus 5X, ayaa laga heli karaa Spain laga bilaabo Noofambar 9